Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Sayf al-Adl
Abaalmarin Gaaraya Illaa $10 Milyan
Al-Adl waa hoggaamiye sare oo al-Qaacida ka tirsan oo xubinna ka ah guddiga hoggaanka AQ, “majlis al-shura.” Sidoo kale Al-Adl waxaa madax u ah guddiga ciidamada al-Qaacida.
Al-Adl wuxuu ahaa oo dembi ayaa waxaa ku soo eedeeyay oo ku soo rogay guurto dadwayne oo xeer federaal ah bishii Nofeember 1998 doorkii uu ku la’haa 7da Abgoosto, 1988, qaraxii ka dhaxay safaaraddihii Maraykanka ee Darasalaam, Tansaaniya iyo Nayroobi, Kiinya. Weerarkaas waxaa ku geeriyooday 224 oo shacab ah oo waxaana ku waxyeeloobay in ka badan 5,000 kale.
Wuxuu ahaa gaashaanle sare ka ahaa Ciidanka Gaarka ah ee Masar ilaa laga soo xiro ee sanadkii 1987 isaga ilaa ku dhowaad kumanaan kun oo ah xoogaga dowladda ku kacsan ka dib marka uu dhacay isku day la isku day in dil loo geysto wasiirka arrimaha gudaha ee Masar
Horaadka sanadka 1990, al-Adl iyo howl wadeeno ka tirsan al-Qaacida waxay tabbarro ciidan iyo sir ay u fidiyeen wadamo dhowr ah, oo ay ka mid yihiin Afghanistaan, Bakistaan iyo Suudaan si ay ugu isticmaalaan al-Qaacida iyo kooxyada xiriirka la leh, oo ay ka mid yihiin ururka Jihaadka Islaamiga Masar (Egyptian Islamic Jihad).
Sanadihii 1990 yadii iyo 1993, Cabdalla wuxuu tabbabar militeri uu u fidiyay howlwadeeno al-Qaacido iyo sidoo kale niman qabaa’ilo Soomaali ah oo la dagaalamay ciidamada Maraykanka Muqdisho ku sugnaa inta lagu jiray howlgalkii Howlgalkii Rajo ku soo Celinta (Operation Restore Hope).
Guurto dadwayne oo xeer federaal ah ayaa waxaa waxay ku soo rogtay bishii Nofeember 1998 doorkii uu ku la’haa 7da Abgoosto, 1988, qaraxii ka dhaxay safaaraddihii Maraykanka ee Darasalaam, Tansaaniya iyo Nayroobi, Kiinya.
Qaraxii ka dib, al-Adl wuxuu u gurey koonfur-barri Iraan ayuu u guuray oo isagoo ilaalo ka helay Ciidamada Ilaalada Kacaanka Islaamiga Iiraan. Inta lagu jiray bishii Abriil 2003 mas’uuliyiinta Iiraan isaga, Cabdalla iyo hoggaamiyayaasha kale ee al-Qaacida xabsi guriga ayay loo tibaaxay.
Bishii Seteember 2015, al-Adl iyo afar hoggaamiyayaal sare oo al-Qaacida ka tirsan waa laga soo daayay gacanta Iiraaniyiinta iyadoo la isdhaafsaday diblomaasiyiin Iraaniyiin oo ay afduubteen al-Qaacida oo Yemen dhexdeeda lagu qabsaday.
Sidoo kale Al-Adl wuxuu laba-xiddigle sare u ahaa Abu Musab al Zarqawi, aassaasaha al-Qaacida Ciraaq taas oo marka dambe noqotay ISIL.
Sawirro dheeraad ah ee
Taariikda Dhalashada: 11 Abriil, 1963; 11 Abriil, 1960
Halkta uu ku Dhashay: Monufia Governate, Masar
Astaamo lagu garto: Waxaa dhici karta inuu gerka daysto oo okiyaalka xirto.
Naanays: Saif al-Adel, Seif Al Adel, Ibrahim al-Madani
Kooxda Argaggixisada u Idmatay:
Wasaarada Arimaha Dibadda ee Mareykanka FTO: 8 Oktoobar, 1999
Wasaarada Arimaha Dibadda ee Mareykanka SDGT: 8 Oktoobar, 1999
Liistiga QM (UN): 6 Oktoobar, 2001
Argaggaxiso u Idmatay Shaqsi:
Wasaarada Arimaha Dibadda ee Mareykanka SDGT: 23 Siteembar, 2001
Liistiga QM (UN): 17 Oktoobar, 2001
Liistiga La Raadinayo:
FBI Aadka u Raadinaysa. DOJ Eedayn si sharci ah. Ogeysiiska Interbool (Interpol UN Blue Notice)
Halkan riix si aad u dhegeysato ogeysiis loogu talo galay dadweynaha oo ku saabsan argagixisadan.